‘जनप्रतिनिधि खटिने भनेकै यस्तै बेलामा हो, महामारीदेखि डराउन मिल्दैन्’
वैशाख २९, काठमाडाैं । आज देशमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएको छ । दाेस्राे लहरमा पुनः हजाराैँ नेपालीहरु कोरोना संक्रमित भएका छन् । सयौंले ज्यान गुमाइसकेका छन् । आज देशका अस्पतालहरु कोरोना संक्रमितहरुले भरिएको छ । संक्रमित बिमारीहरुले अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटरको सुविधा पाएका छैनन् । कोरोना रोकथामको पहिलो क्षेत्र भनेकै परिवार र समाज हो । समाजमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ र पालिकाहरु कसरी जुधिरहेका छन् ? प्रस्तुत छ, यस्तै विषयमा सन्सार न्यूजले भिरकोट नगरपालिकाका मेयर छायाराम खनालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंको पालिकाभित्र कति जनाको पिसिआर परिक्षण भयो ?
अहिलेसम्म भिरकोट नगरपालिका भित्र २५७ जनाको पिसिआर परिक्षण गरिएको छ । अहिलेसम्म हामीले लक्षण देखिएकालाई बोलाएर वा घरमै गएर परिक्षण गर्ने गरेका छौं ।
कति जना मानिसलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ ?
हामीले यहिँबाट र बाहिरबाट गरेको परिक्षणबाट ४० जनालाई पोजेटिभ देखिएको छ ।
संक्रमितहरुको अवस्था कस्तो छ ?
अहिलेसम्म संक्रमण देखिएकामध्ये १ जनाको हिजो मृत्यु भएको छ । उहाँ भारतबाट आउनुभएको ६२ वर्ष उमेरको हुनुहुन्थ्यो । अहिले पोखरामा २ जना र १ जना स्याङ्जामा आइसियुमा उपचाररत अवस्थामा हुनुहुन्छ । १ जना आइसियुबाट डिस्चार्ज भएर आउनुभयो । त्यस्तै २ जना कोरोना संक्रमण पुष्टि नभएका चेक गर्न जाने भनेर लाग्दैगर्दा बाटोमा नै बित्नुभयो । अरु संक्रमितहरुको अवस्था सामान्य रहेको छ ।
हामीले प्राविधिकको सल्लाह अनुसार २४ वटा सिलिण्डर जोड्यो भने ५० जना बिमारीलाई पाइपकै माध्यमबाट एकैपटकमा दिन सकिने रहेछ । यो प्रकारको प्रविधिलाई हामीले आजबाट जोड्ने कामको शुरुवात गरेका छौं । यसको लागि जिल्ला कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम समिति र प्रदेश सरकार दुवैले सहयोग गरेका छन् ।
संक्रमितहरु कहाँ कसरी बसिरहेका छन् ?
उपचाररत बाहेकका २४ जना सबै संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ । उहाँहरुको अवस्था सामान्य हुँदै गएको छ । स्वास्थ्यकर्मीबाट उहाँहरुलाई नियमित फ्लो गर्ने र काउन्सिलिङ दिने कामको प्रबन्ध मिलाएका छौं । उहाँहरुलाई जटिल अबस्था सिर्जना भयो भने तुरुन्तै अस्पताल लैजाने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
अहिलेसम्म हामीले विमारीको अवस्था जटिल भयो भने जिल्लामा भएसम्म जिल्लामा पठाउने त्यहाँ नभएमा पोखरा पठाउने कुराको समन्वय गरिरहेका छौं ।
आइसोलेसन वा अस्थाई अस्पतालको व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
आइसोलेसन तथा प्रारम्भिक उपचारको लागि हेलुमा रहेको कालिका सामुदायिक अस्पतालमा ५० सैयाको व्यवस्था मिलाउँदैछौं । जसको लागि साना ठुला गरेर अहिलेसम्म हामीसँग ५० वटा अक्सिजन सिलिण्डर पनि रहेका छन् । मुख्य कुरा हामीसँग जनशक्तिको अभाव भयो । त्यसैले त्यसको लागि हामीले जिल्ला र प्रदेश सँग सहयोग मागेका छौं । जसअनुसार उहाँहरुले काजमा भएपनि जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रतिद्धता जनाउनुभएको छ । त्यसैले अहिले रंगरोगन र तयारीको काम भइरहेको छ । करिब काम अन्तिम भएको अब लगत्तै आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भएको छ ।
आइसोलेसनको लागि महत्वपुर्ण आवश्यकता अक्सिजन हो । त्यसको लागि अहिले प्लान्ट निर्माण गर्न समय कम होला । हामीले प्राविधिकको सल्लाह अनुसार २४ वटा सिलिण्डर जोड्यो भने ५० जना बिमारीलाई पाइपकै माध्यमबाट एकैपटकमा दिन सकिने रहेछ । यो प्रकारको प्रविधिलाई हामीले आजबाट जोड्ने कामको शुरुवात गरेका छौं । यसको लागि जिल्ला कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम समिति र प्रदेश सरकार दुवैले सहयोग गरेका छन् ।
प्रारम्भिक औषधीको केहि व्यवस्था गर्नुभएको छ ? कसरी गर्नुभएको छ ?
गरिएको छ । संक्रमितहरुलाई आवश्यकताको आधारमा स्वास्थ्य सँस्था मार्फत प्रारम्भिक प्रकारका औषधीहरु दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । उहाँहरुले औषधी प्राप्त गरिरहनुभएको छ ।
बाहिरबाट आउनेहरुलाई क्वारेन्टाइनको के व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
गाउँमा आउने नयाँ मान्छेहरुको विषयमा सुचना अद्यावधिक गर्नको लागि हामीले टोल विकास समिति र वडा समितिलाई सक्रिय बनाएर विशेष जिम्मेवारी दिएका छौं । टोल विकास सँस्थाका संयोजकहरुलाई नियमित समन्वयको लागि सञ्चार खर्च पनि उपलब्ध गराएका छौं । उहाँहरुलाई वडा सचिवले परिचालन गर्ने, वडा समितिले संयोजन गर्ने काम गर्छ ।
हामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई चौबिसै घण्टा प्राथमिक उपचार र समन्वयको लागि सतर्क अवस्थामा राखेका छौं । उहाँहरु आवश्यकताअनुसारको परामर्श उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित ठाउँमा नै पुग्न पर्ने अवस्थामा पुग्ने काम गर्नुहुन्छ । प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएका छौं । त्यस्तै २ वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।
बिमारीहरुलाई उपचार गर्न, अस्पताल पुग्न र सवारी साधन व्यवस्थाको लागि पालिकाले के गरेको छ ?
हामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई चौबिसै घण्टा प्राथमिक उपचार र समन्वयको लागि सतर्क अवस्थामा राखेका छौं । उहाँहरु आवश्यकताअनुसारको परामर्श उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित ठाउँमा नै पुग्न पर्ने अवस्थामा पुग्ने काम गर्नुहुन्छ । प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएका छौं । त्यस्तै २ वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा रहेका छन् । अहिले सम्म अवस्था जटिल देखिएको छैन् तर जटिल अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो भने थप स्रोत साधन जुटाउने अवस्थामा हामीहरु रहेका छौं ।
तपाईंको नेतृत्वमा रहेको पालिकाको टिम कोभिड नियन्त्रणमा कसरी परिचालन गर्नुभएको छ ?
मेरो अध्यक्षतामा उपप्रमुख सहित ९ वटा वडा अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, उद्योग वाणिज्य संघ, रेडक्रस लगायत संघसँस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गराएर समिति निर्माण गरेका छौं । त्यसको बैठक राखेर हामीले हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौं । त्यस्तै प्रकारको समिति हामीले वडा स्तरमा पनि निर्माण गरेका छौं, जसमा वडा अध्यक्षले समितिको नेतृत्व गरेर काम गर्नुभएको छ ।
कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि लागु गरिएको निषेधाज्ञाको कारणले रोजगार गुमाएर आधारभुत जिवनमा असर परेकाहरुलाई कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले गतसाल लकडाउनको क्रममा औसतमा पिडितहरुलाई सहयोग उपलब्ध गरायौं । यसपटक निषेधाज्ञाको कारणले समस्यामा पर्ने अवस्था कोहि भयो भने त्यसको सुचना टोल विकास सँस्था हुँदै आउँछ । हामीले समस्यामा परेको परिवारलाई तुरुन्त सहयोग उपलब्ध गराउँने काम गछौं । त्यसको लागी नगरपालिका तयारी अवस्थामा रहेको छ । तर अहिले सम्म त्यस्तो प्रकारको समस्या आइसकेको छैन् ।
यस्तो महामारीमा हामी सचेततापुर्वक जनताको सेवामा खटिनु पदर्छ । हामीले हिम्मत नगरि पनि हुँदैन यस्तो समयमा । त्यसमाथि हामीले कामको राम्रोसँग बाँडफाँड गरेका छौं । आवश्यकताको आधारमा आफु खट्नुपर्ने क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खट्नुपर्छ । डराएर हामी जनप्रतिनिधि नै पछाडि हट्यौं भने त झन अवस्था कहाँ पुग्छ ?
तपाईं आफैं दमको बिमारी हुनुहुन्छ, कोरोना महामारी सँग जुद्धै काम गर्दा डर लागेको छैन ?
मलाई त डर लाग्दैन् । यस्तो महामारीमा हामी सचेततापुर्वक जनताको सेवामा खटिनु पदर्छ । हामीले हिम्मत नगरि पनि हुँदैन यस्तो समयमा । त्यसमाथि हामीले कामको राम्रोसँग बाँडफाँड गरेका छौं । आवश्यकताको आधारमा आफु खट्नुपर्ने क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर खट्नुपर्छ । डराएर हामी जनप्रतिनिधि नै पछाडि हट्यौं भने त झन अवस्था कहाँ पुग्छ ? त्यसैले हामी डराउने भन्ने कुरा नै हुँदैन् ।
अन्त्यमा, स्थानीयलाई तपाईँले के भन्नु छ कि ?
यो अवस्थामा खासगरी सबैले घट्नाक्रमको सुचना हामीलाई नियमित रुपमा टिपाइदिनु पर्यो । जसले गर्दा कहाँ के अवस्था भैरहेको छ भन्ने कुराको समयमा नै जानकारी पाएर आवश्यक कदम चाल्न सकियोस । समस्याको शुरुमा नै जानकारी पाउन सकिएमा त्यसको सहज निराकरण गर्न सकिन्छ । अन्यथा कोरोना संक्रमणको विषयलाई सामान्य रुपमा लिएर समय गुजार्दा त्यसले पछि सिर्जना गर्नसक्ने समस्याको सामाधान गर्न गाह्रो हुन सक्छ । त्यसैले मैले भिरकोटबासी समुदायलाई संक्रमणको विषयमा कुनै शंका लागेमा प्राथमिक अवस्थामा नै विभिन्न माध्यमबाट सुचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु । त्यस्तो अवस्थमा हामीले समस्यालाई सहि ढंगले समाधान गर्न सक्षम हुन्छौं भन्न चाहन्छु ।
कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट प्रभावित बनेको औद्योगिक तथा व्यवसायीक क्षेत्र…
अहिले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रसँग सम्बद्ध ट्रेड यूनियनहरु सामाजिक सूरक्षाकोष…
सबै कुरा छोडेर जनता बचाउने तर्फ लाग्नु अहिलेको प्राथमिकता हो
ओली र भण्डारीबीचको ‘मिलेमतो’ देश र संविधानका लागि खतरा छ
गाउँका योजना सिंहदरबारबाट होइन जनताका घरदैलोमा बन्छन्
भेरि अस्पतालका डाक्टर संकेतकुमार भन्छन् – भ्याक्सिन लगाएकामा कोरोनाको समस्या कम देखियो